February 18, 2020 - MM Live News
အောငျလကိုစိနျချေါပွီးမှ ဒဏျရာရှိပါတယျလို့ အကွောငျးပွလာတဲ့ နယျသာလနျဖိုကျတာ…
February 18, 2020 MM Live News
အောင်လကိုထိုးသတ်ဖို့ စိန်ခေါ်ပြီးမှ ဒဏ်ရာရှိပါတယ်လို့ အကြောင်းပြလာတဲ့ နယ်သာလန်ဖိုက်တာ မြန်မာပြည်သားတွေရဲ့အသည်းကျော် MMAကစားသမားကြီး​အောင်လအန်ဆိုင်းကတော့ ချန်ပီယံဘွဲ့ကိုကာကွယ်ဖို့ အပြင်းအထန်လေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်နေပြီဆိုတာကို သူ့ရဲ့လူမှုစာမျက်နှာကနေ ပြောလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်​။ အောင်လကဖိုက်တာတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝဟာမလွယ်ကူပေမယ့် ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ဘဝမို့ ဒီဘဝကိုနှစ်သက်ပါတယ်လို့ ပြောပြခဲ့တာပါပြီးတော့​ အောင်လကသူ့ရဲ့ဘဝဟာအရမ်းကိုရိုးရှင်းလွန်းပါတယ်လို့လဲ သူ့ပရိတ်သတ်တွေကို ဝန်ခံခဲ့ပါသေးတယ်။ ဘာလိုလဲဆိုတော့ သူဟာသူ့ရဲ့အားကစားကိုပဲပုံမှန်အတိုင်းလေ့ကျင့်နေတာဖြစ်ပြီး ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲဖြတ်သန်းနေတယ်…အခုလဲ နည်းပြဖြစ်သူHenrihooftနဲ့ခြေထောက်ကန်​ လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်နေပါတယ်လို့ ပြောပြလာပါတယ်။ အဆိုပါ မြန်မာစပါးအုံးအမည်ဆောင် ဝိတ်တန်း၂ခုရဲ့ချန်ပီယံကြီးဟာသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်သူတွေနဲ့ စိန်ခေါ်လာသူတွေကိုလည်း အရမ်းကိုလေးစားမှုရှိသလို ပြိုင်ဘက်တိုင်းကလည်း​ အောင်လနဲ့ထိုးသတ်ခွင့်ရဖို့အရေးကို အပြိုင်အဆိုင်ကြိုးစားနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲကမှ​ နောက်ဆုံးစိန်ခေါ်လာတဲ့နယ်သာလန်နိုင်ငံသား Reinier De Ridderဟာဆိုရင်လည်း နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ ဖိုက်တာတစ်ဦးပဲဖြစ်ပြီး MMA လောကမှာ ၁၁ပွဲဆက်တိုက်အနိုင်ကိုသာ ရရှိထားသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ​အောင်လအန်ဆိုင်ဟာသူရဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်သူနဲ့ ထိုးသတ်ဖို့လေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်လျက်ရှိနေပြီး အတည်ပြုလက်မှတ်ကိုလည်း ၁၂ရက်နေ့​ဖေဖဝါရီလက တရားဝင်ရေးထိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အောင်လအန်ဆိုင်းအနေနဲ့တရားဝင်ထိုးသတ်ဖို့လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာမှာပဲ စိန်ခေါ်လာတဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်သူ Reinier […]
အောငျလကိုစိနျချေါပွီးမှ ဒဏျရာရှိပါတယျလို့ အကွောငျးပွလာတဲ့ နယျသာလနျဖိုကျတာ
February 18, 2020 February 18, 2020 MM Live News
ညညအိပ်မပျော်သူတိုင်း ရောဂါဖြစ်နေသူပဲဖြစ်ဖြစ် အိပ်မပျော်လျှင် ၁.ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီး မှည့်စားပါ။အိပ်စက်ခြင်းတွက် အထူးကောင်းမွန်းပြီး အားရှိသည်။ ၂.နွားနို့သောက်ခြင်းက အရိုးအဆစ်သန်မာသည့်အပြင် အိပ်စက်ခြင်းကို မြန်ဆန်စေပါသည်။ ၃.ကြက်သွန်ဖြူခေါင်းအုံးအောက်၃တက်ထားအိပ်ပါ။ဦးနှောက်မှ အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အိပ်စက်မှုကို မြန်ဆန်စေသည်။ ၄.ကြက်သွန်နီထက်ခြက်ခွဲပီး ခြေဖဝါအလည်တည့်တည့်ကပ်ပါ။ တစ်ကိုယ်လုံးမှ အဆိပ်အတောက်များကို စုပ်ယူပါလိမ့်မယ်။ အအေးမိနာစေးသူ ကလေး လူကြီးမရွေး လုပ်ပေးပါက သက်သာပျောက်ကင်းစေပါမည်။ Crd ဆေးမီးတို unicode ညညအိပျမပြျောသူတိုငျး ရောဂါဖွဈနသေူပဲဖွဈဖွဈ အိပျမပြျောလြှငျ ၁.ဖီးကွမျးငှကျပြောသီး မှညျ့စားပါ။အိပျစကျခွငျးတှကျ အထူးကောငျးမှနျးပွီး အားရှိသညျ။ ၂.နှားနို့သောကျခွငျးက အရိုးအဆဈသနျမာသညျ့အပွငျ အိပျစကျခွငျးကို မွနျဆနျစပေါသညျ။ ၃.ကွကျသှနျဖွူခေါငျးအုံးအောကျ၃တကျထားအိပျပါ။ဦးနှောကျမှ အဆိပျအတောကျမြားကို ဖယျရှားပေးပွီး အိပျစကျမှုကို မွနျဆနျစသေညျ။ ၄.ကွကျသှနျနီထကျခွကျခှဲပီး ခွဖေဝါအလညျတညျ့တညျ့ကပျပါ။ တဈကိုယျလုံးမှ အဆိပျအတောကျမြားကို စုပျယူပါလိမျ့မယျ။ အအေးမိနာစေးသူ ကလေး လူကွီးမရှေး လုပျပေးပါက သကျသာပြောကျကငျးစပေါမညျ။Crd […]
ရနျကုနျမွဈထဲ သင်ျဘောပျေါမှ ပေ (၄၀)အမွငျ့ကနေ လြှပျတဈပွကျ ခုနျခပြွီးကယျဆယျခဲ့တဲ့ ရယောဉျမှူးဦးမွငျ့အေး ( ရုပျ သံ )
သင်္ဘောပေါ်ကအသက်တစ်ချောင်းကယ်တင်ရှင် ရေယာဉ်မှူး ဖေဖော်ဝါရီ – ၁၈ ၊၂၀၂၀ သူကတော့ နှစ်ထပ်သင်္ဘောပေါ်ကနေခုန်ချပြီး ရေနစ်နေတဲ့အမျိူးသမီးကို သက်စွန့်ဆံဖျားကယ်တင်ခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံထဲက ဦးမြင့်အေးပါ။ ရန်ကုန်နဲ့ဒလဖက်ကမ်းကို ပြေးဆွဲနေတဲ့ချယ်ရီသင်္ဘောပေါ်ကရေယာဉ်မှူးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဦးမြင့်အေးဟာ ပေလေးဆယ်ကျော်လောက်မြင့်တဲ့ နှစ်ထပ်သင်္ဘောရေယာဉ်ဦးပိုင်းကနေ လျှင်မြန်စွာခုန်ဆင်းပြီးရေထဲကျသွားတဲ့အမျိူးသမီးကိုကယ်တင်ခဲ့နိုင်တာပါ။ ဒလဘက်ခြမ်းမှာ ရေယာဉ်ကမ်းကခွာနေတုန်းအမျိူးသမီးတစ်ဦးခြေချော်ပြုတ်ကျသွားတာကို အပေါ်ကနေမြင်မြင်ချင်းမှာပဲ လျှပ်တစ်ပြတ်ခုန်ဆင်းခဲ့တဲ့ ရေယာဉ်မှူးဦးမြင့်အေး ဟာအသက်၆၀ရှိနေပါပြီ။ ခုန်ဆင်းသွားတဲ့အချိန်မှာသင်္ဘော နဲ့ ဆိပ်ခံတံတားကြားဖြစ်နေတာကြောင့် ရေပေါ်မကျဘဲ သင်္ဘောနဲ့ထိခိုက်မိမှာကို အားလုံးကစိုးရိမ်ခဲ့ကြတာပါ။ သူအခုလိုခရီးသည်တစ်ဦးအပေါ်ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာကိုဂုဏ်ယူစွာနဲ့အခုလိုပြောပါတယ်။ဒီကနေ့တော့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တစ်ခုလုံး သင်္ဘောပေါ်က ခုန်ချနေတဲ့ ဦးမြင့်အေးရဲ့ ဓာတ်ပုံနဲ့ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုသံတွေလည်း ညံနေခဲ့တာပါ။ တကယ်တော့ အခုလိုကယ်တင်မှုကသူ့အတွက် ပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အခုချယ်ရီသင်္ဘောအသစ်တွေ မရောက်ခင် ထီးလှိုင်ရှင်သင်္ဘော နဲ့ ပန်းဆိုးတန်း-ဒလသင်္ဘောပြေးဆွဲစဉ်ကလည်း ခရီးသည်တစ်ဦးကို အခုလိုပဲ ကယ်တင်ခဲ့ရဖူးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးရဲ့ရေယာဉ်တွေမှာ နှစ်ပေါင်း၄၀ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ထားတဲ့ဦးမြင့်အေးဟာ ဒီနှစ်ထဲမှာ အငြိမ်းစားယူဖို့လည်း ရှိနေတာကြောင့်သူ့အတွက် တစ်ဘဝလုံးဂုဏ်ယူရမယ့် […]
မနကျက ရနျကုနျမွဈထဲ သင်ျဘောပျေါမှ အမြိုးသမီးတဈဦး ရထေဲပွုတျကခြဲ့ရာ အမွငျ့ကနခေုနျခပြီး ကယျဆယျသူရဲ့ အသကျကို သိလိုကျရသောအခါ
မနက်​က ရန်​ကုန်​မြစ်​ထဲ သ​င်္ဘော​ကမ်းထွက်​ချိန်​မှာ အမျိုးသမီးတစ်​ဦး ​ရေထဲပြုတ်​ကျ သွားတာကို ဝိုင်းဝန်း ဆယ်​ယူ​ပေးသည့်​ …. အခြားခရီးသည်​​များ နဲ့အတူ အသက်​ ၆၀ အရွယ်​ ရေယာဉ်​မှူးဖြစ်​သူ ဦးမြင့်​​အေးဆိုသူမှ သ​င်္ဘောဦးထိပ်​မှ ​မြစ်​ထဲသို့ ခုန်​ချလိုက်​သွားပြီး ​…. ဘေးမသီရန်​မခ ပြန်​လည်​ ဆယ်​ယူကယ်​တင်​ လိုက်​နိုင်​ခဲ့ပါသတဲ့ …..။Kyaw Lwin ယနေ့မနက် ၁၀နာရီအချိန်ခန့်က ဒလ-ရန်ကုန်ခရီးသွားသင်္ဘောပေါ်မှ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ရေထဲပြုတ်ကျခဲ့ရာ ကယ်ဆယ်တဲ့သူတွေ လေးစားစရာ အမြင့်ကနေခုန်ချပီး ဝိုင်းဝန်းဆယ်ခဲ့ရ 18.2.2020 ယနေ့မနက် ၁၀နာရီအချိန်ခန့်က ဒလ-ရန်ကုန်ခရီးသွားသင်္ဘောပေါ်မှ ခရီးသည်အမျိုးသမီးတစ်ဦး ရေထဲပြုတ်ကျခဲ့ပါတယ်….။ ကယ်ဆယ်တဲ့သူတွေ လေးစားစရာ အမြင့်ကနေခုန်ချပီး ဝိုင်းဝန်းဆယ်ခဲ့ရပါတယ်….။ အဆိုပါအမျိုးသမီး ကံကောင်း ဘာမှမဖြစ်…..။ ရေအရမ်းစီးနေတာအသက်ကိုမငှဲ့ဘဲကယ်တင်တာလေးစားပါတယ်ဗျာ…..။ အထူးလေးစားမိပါတယ် …..။ကူညီသူများအားလုံးကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ……။Photo=Min Myo […]
ဒီသငျခနျးစာတှဟော မငျးရဲ့ ကြောငျးဖတျစာအုပျတှထေဲ သငျပေးမှာမဟုတျတဲ့ သမ်မတတဈယောကျထိ ဖွဈလာတဲ့ သငျခနျးစာတှေ
ရှီကျင်းပင်က ငယ်ငယ်က အရမ်း တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တယ်တဲ့။သားသမီးတွေ အတွက် တစ်ခုခုဝယ်လာရင် သူကအကောင်းဆုံးကို ယူတယ်။ အဲဒါကြောင့် သူ့ကို ဘယ်သူမှ အပေါင်းအသင်း မလုပ်ချင်ကြသလို ကစားဖော် သူငယ်ချင်းလည်း မရှိဘူးတဲ့။ဒါကိုလည်း သူ့ရဲ့ အမှားလို့ သူမထင်ဘူးတဲ့။ တစ်ရက်မှာတော့ သူ့အဖေက သူကို သင်ခန်းစာ ပေးချင်တာနဲ့ ခေါက်ဆွဲ ၂ ပွဲ ပြင်ထားတယ်။ တစ်ပွဲမှာ ကြက်ဥကို ခေါက်ဆွဲပေါ် တင်ထားပြီးနောက်တစ်ပွဲမှာ ကြက်ဥပါတာ မတွေ့ရဘူး။ သူ့ကိုလည်း သား မင်းကြိုက်တဲ့ ခေါက်ဆွဲ ပွဲယူစားဆိုတော့ သူက ကြက်ဥပါတဲ့ ပွဲကိုအရင်ယူ စားတာပေါ့။ အဲဒီအချိန်တွေတုန်းကကြက်ဥက တရုတ်ပြည်မှာ ဒီလောက်မပေါသေးဘူးတဲ့။သူတို့ မိသားစုတွေ အတွက် နှစ်သစ်ကူးလို နေ့တွေမှာသာ ကြက်ဥ စားကြရတာကိုး။ ရှီကျင်းပင်က ကြက်ဥစားရတော့ ပျော်တာပေါ့။ […]
သရုပျဆောငျမသေနျးနုအား အိမျပေါငျခဲ့သညျ့အတှကျ သင်ျဃနျးကြှနျးမွို့နယျ တရားရုံးတှငျထပျမံတရားစှဲ
သရုပ်ဆောင်မေသန်းနုအား အိမ်ပေါင်ခဲ့သည့်အတွက် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် တရားရုံးတွင်ထပ်မံတရားစွဲ ရန်ကုန်၊ ဖေဖောဝါရီ ၁၈ သရုပ်ဆောင်မေသန်းနုအား လှည်းတန်း ၆လမ်း၊ အိမ်နံပတ် ၁၁ ရှိတိုက် ၂ထပ်အိမ်အား အိမ်ပေါင်ခဲ့သည့်အတွက် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် တရားရုံး တွင်ထပ်မံတရားစွဲဆိုခြင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း တရားလို မစန်းစန်းမြင့်ကပြောကြားခဲ့သည်။ “အခုကတော့ ရက်ချိန်းယူတာပါ။၂၇ ရက်နေ့မှာ ရုံးချိန်းပြန်ချိန်ဆိုပါတယ်။ရက်ပေါင်း ၂၇၀ ကိုအပြီးစစ်မယ်လို့ပြောထားတယ်။ဒီကိစ္စက ကျွန်မအိမ်ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာပေါင်ခဲ့တာ ၂၀၁၆မှာဆုံးသွားတာပါပေါင်တာ။ သူတို့ဘက်က အကူအညီတောင်းလို့ လုပ်ပေးလိုက်တာပါ။ အခုဆုံးသွားပြီ။ ပထမစစွဲခင်တုန်းက မပါဘူး။ မပါတော့ သူကမဆင့် ကမပေးဘူး။ဒါကြောင့် ထပ်ပြီးတော့ စွဲလိုက်တာပါလို့ ၎င်းကပြောသည်။ ဆက်လက်၍ “ကျွန်မက ပိုက်ဆံပေးထားတယ်ဆိုတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အတိုး၃၀ တိုးဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မက သိန်း၄၀၀နဲ့ တရားစွဲသွားတယ်။ နောက်တိုင်းမှာ ဘဏ်စာရွက် သိန်း၆၂၅ကိုချက်လက်မှတ်ကိစ္စ၊ ကားပေါင်သွားတဲ့ […]
ယနမေ့နကျ ၁၀နာရီအခြိနျခနျ့က ဒလ-ရနျကုနျခရီးသှားသင်ျဘောပျေါမှ အမြိုးသမီးတဈဦး ရထေဲပွုတျကခြဲ့ရာ ကယျဆယျတဲ့သူတှေ လေးစားစရာ အမွငျ့ကနခေုနျခပြီး ဝိုငျးဝနျးဆယျခဲ့ရ
18.2.2020 ယနေ့မနက် ၁၀နာရီအချိန်ခန့်က ဒလ-ရန်ကုန်ခရီးသွားသင်္ဘောပေါ်မှ ခရီးသည်အမျိုးသမီးတစ်ဦး ရေထဲပြုတ်ကျခဲ့ပါတယ်….။ ကယ်ဆယ်တဲ့သူတွေ လေးစားစရာ အမြင့်ကနေခုန်ချပီး ဝိုင်းဝန်းဆယ်ခဲ့ရပါတယ်….။ အဆိုပါအမျိုးသမီး ကံကောင်း ဘာမှမဖြစ်…..။ ရေအရမ်းစီးနေတာအသက်ကိုမငှဲ့ဘဲကယ်တင်တာလေးစားပါတယ်ဗျာ…..။ အထူးလေးစားမိပါတယ် …..။ကူညီသူများအားလုံးကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ……။ Photo=Min Myo unicode 18.2.2020 ယနမေ့နကျ ၁၀နာရီအခြိနျခနျ့က ဒလ-ရနျကုနျခရီးသှားသင်ျဘောပျေါမှ ခရီးသညျအမြိုးသမီးတဈဦး ရထေဲပွုတျကခြဲ့ပါတယျ….။ ကယျဆယျတဲ့သူတှေ လေးစားစရာ အမွငျ့ကနခေုနျခပြီး ဝိုငျးဝနျးဆယျခဲ့ရပါတယျ….။ အဆိုပါအမြိုးသမီး ကံကောငျး ဘာမှမဖွဈ…..။ ရအေရမျးစီးနတောအသကျကိုမငှဲ့ဘဲကယျတငျတာလေးစားပါတယျဗြာ…..။ အထူးလေးစားမိပါတယျ …..။ကူညီသူမြားအားလုံးကနျြးမာ ခမျြးသာကွပါစေ……။ Photo=Min Myo
မီတာခတှေ အမွဲတမျး ၈သောငျးကြျောကလြို့ စဈဆေးကွညျခိုငျးလိုကျသောအခါ…
မီတာခတွေ အမြဲတမ်း ၈သောင်းကျော်ကျလို့ စစ်ဆေးကြည်ခိုင်းလိုက်သောအခါ မီတာခ တလတလ၈​သောင်း ၉​သောင်း​​ကျော်လောက်ကျတယ် ….မီတာခအများကြီးကျလို့ air conသုံးတာ​တွေ​လျော့ ​ရေခဲ​သေတ္တာညပိုင်းပဲဖွင့်သုံး မီးကို​​မလိုအပ်တာကို မသုံးပဲ​ချွေတာ​နေလဲ ၈​သောင်း​ကျော်​ဆောင်​နေရလို့ မသင်္ကာတာနဲ့ …. ပြီးခဲ့တဲ့လက မီတာမ​ဆောင်ခင် မီတာရုံးသွားပြီး တာဝန်ကျ​နေတဲ့ အထက်လူကြီးကို ဝင်တိုင်လိုက်တယ် …သူတို့ကလာစစ်​ဆေး​ပေးမယ်လို့​ပြောလိုက်တယ်… ကိုယ့်ဘာသာစစ်ရ​အောင်လည်း digitalမီတာပုံးက ဓါတ်တိုင်​ပေါ်မှာ ​နောက်၃ရက်​လောက်ကြာ​တော့ စစ်​ဆေး​ရေးဝန်ထမ်းနဲ့ မီတာဖတ်တဲ့သူ​ရောက်လာတယ် …. ဓါတ်တိုင်​အောက်​ရောက်​​တော့ ကိုယ့်မီတာစာရွက်က code noနဲ့ digital စက်နဲ့ဓာတ်တိုင်အောက်က လှမ်းဖတ်တယ် ….မီတာကိုဖတ်လိုက်​တော့ ယူနစ်၂၀၀​ကျော် ပို​ကောက်ထားတာ​တွေ့ရတယ်…. အဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်ရတာလည်း ဘာ​ကြောင့်ဖြစ်တာလဲ ကျွန်မတို့မသုံးပဲနဲ့တလတလ ယူနစ်၂၀၀​ကျော်ဖိုးသက်သက်​ဆောင်​နေရတာလား….အဲ့လို​ဆောင်​နေရတာ ဘယ်​လောက်​တောင်ကြာ​နေပြီလဲ အထက်ကို​ရောက်​​အောင်တိုင်မယ်လဲ​ပြောလိုက်​ရော…. မီတာဖတ်တဲ့ဝန်ထမ်းက ကျွန်​တော်ယူနစ်ကို လာမဖတ်ပဲမှန်းပြီးရေးလိုက်တာတဲ့ မှန်း​ကောက်မိတာပါတဲ့ ….အဲ့လိုလုပ်လို့ရလား နင်တို့မီတာရုံးက အဲ့လိုလုပ်စား​နေတာလား …နင်အဲ့လိုမှန်းကောက်နေတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလည်းမေးတော့ […]